သူ၏ခြေဖဝါးအောက်တွင်ကျွန်တော်၏နှလုံးသားရှိသည်။ - Ooh Aeri Sestan - Wattpad
ကိုယ်ဟာ အနားမညီတဲ့အချစ် ကာရန်မလှတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးခဲ့သူမို့ ကလေးရေ မင်းစိတ်ကြိုက်ကိုယ်ကို စေခိုင်းပါ။ကိုယ့်နှလုံးသားလေးကမင်းခြေဖဝါးအောက်မှာခစားလျက်ပါ။
ဟိဟိ ကြွေပီ အဆင်ပြေပေးေ်Sulayကို HoလေးလဲXingလေးကိုအအြနိပြန်ချစ်လာပါစေလို့ ဆက်ရေးပါညော် အားပေးနေတယ်
Waiting for update^_^
authorရယ်စလာထဲကရီလိုက်ရတာ အူတက်နေပြီပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှု ထဲက အလွဲလွဲအချော်ချော်နဲ့ Sulayကတော့
ဖတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ် but နဲနဲတိုလားလို့ အဟီးးးးးး
အို တိုတိုလေးရယ် XD ဆက်ရေးပါ မျှော်နေမယ်နော် ဟိဟိ
Reply Get notified when သူ၏ခြေဖဝါးအောက်တွင်ကျွန်တော်၏နှလုံးသားရှိသည်။ is updated Continue with FacebookContinue
I Hate You(Translater Fic)
Can U See My Heart??
Rest in peace အာဒံ...
Still I Love You [COMPLETED]
By - suyeelim
Yixing x Junmyeon